२० जना पत्रकारको टोली चीनमा, नेपाल–चीन सम्बन्धबारे अन्तरक्रिया - Pahilo News
२० जना पत्रकारको टोली चीनमा, नेपाल–चीन सम्बन्धबारे अन्तरक्रिया
३० असोज । चाइना फाउन्डेसन फर पीस एन्ड डेभलप्मेन्ट (सीएफपीडी) को निमन्त्रणामा पत्रकारसहित २० जनाको टोली चीन पुगेको छ । आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको टोलीले सोमबार विहानैदेखि सिंचुवान प्रान्तको राजधानी चेङ्दुमा भेटघाट तथा छलफल सुरु गरेको छ ।
टोलीको नेतृत्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. नारद भारद्वाजले गरेका छन् । झापा आन्दोलनका क्रममा १४ वर्ष जेल बसेका भारद्वाजलाई अघिल्लो सरकारले श्रीलंकामा राजदूत बनाएर पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरेपछि उनीसँगैँ १४ जनाको नियुक्तिका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारधीन छ ।
टोलीमा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्की, माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य महेश्वर दाहाल, गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष गोविन्द पोखरेल, जीपी कोइराला फाउन्डेसनका तर्फबाट राकेश हमाल, हरि ढुंगाना, एन्ड्रिज सिद्धार्थ (सुजाता कोइरालाका छोरा), मधेसवाणीका सम्पादक डा. राजेश अहिराज, प्रेस काउन्सिलका सदस्य चन्द्रदेव कामती र मुरलीप्रसाद यादव, बुटवल टुडेका सम्पादक नवराज कुँवर, लेखक संकेत कोइरालाका साथै विमल पोखरेल, निर्मल महरा (अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका छोरा), माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पुस्तकालय प्रमुख सावित्राकुमारी शर्मा, कान्तिपुरका पत्रकार लक्ष्मी साह, दानदास श्रेष्ठ, जनआस्थाका उमेश दाहाल, डा. हेमप्रभा पाण्डे र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका दीलिप महर्जन छन् ।
उक्त टोलीले नेपाल-चीन सम्बन्धका विविध आयामका विषयमा चेङ्दु र चोंकिंगमा आयोजना हुने गोष्ठीहरुमा भाग लिनेछ । त्यहाँका विश्वविद्यालयहरुमा पनि उनीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम छ ।
भ्रमणको संयोजन नेपाल चाइना मिडिया फोरमले गरेको हो । टोली एक सातापछि स्वदेश फर्किनेछ ।